Ngililungisa kanjani iphutha le-Shell32 DLL? - Amafayela
Main > Amafayela > Yini i-shell32.dll - izixazululo ezintsha
Ngililungisa kanjani iphutha le-Shell32 DLL?
Ungakwenza kanjaniLungisa uShell32. Amaphutha we-dll
Qalisa ukuskena igciwane / i-malware yohlelo lwakho lonke. ...
Sebenzisa Ukubuyiselwa Kwesistimu ukulungisa izinguquko zesistimu yakamuva. ...
Qalisa umyalo we-sfc / scannow System File Checker wokufaka esikhundleni se-ilahlekilenoma ikhophi elonakele le-Igobolondo32. ...
Phinda ufake uhlelo olusebenzisa ifayela le-Igobolondo32.
Ngiyivula kanjani i-Shell32 DLL?
Ku-Visual Studio, khetha 'FileVula... 'bese' Ifayela ... '. Bese ukhetha ifayela le-Igobolondo32.njll. Isihlahla sefolda kufanele sivulwe, futhi uzothola izithonjana kufolda ye-'Isithonjana '.Juni 14, 2016
Ngiyikhipha kanjani i-Shell32 DLL?
Ngibhekabheka iphaneli elifanele le-Igobolondo32.njll. Uma uyithola, qhafaza kwesokudla kufayela bese ukhetha u-'Susa'kusuka kumenyu ezivelelayo. Lokhu kuzohambisa ifayela ngokuzenzakalela ku-Recycle Bin.Juni 26, 2012
Wamukelekile kwesinye isifundo sokufunda. Namuhla ngizokukhombisa ukuthi ungazibuyisa kanjani izithonjana zakho zoqobo ngemuva kokuthi ufake iphakethe lokuqhekeza futhi zonke izithonjana zibuyele kokujwayelekile kunama-dllfilenun amabili uma usabhaka ku-PAX azoqukatha inguqulo eguquliwe yaleli fayela futhi zingena esikhundleni sazo zonke izithonjana lapho ulanda uhlobo lwesilingo lwesoftware ebizwa nge-Micro Angelo bese uvula bese uhudulela umphathi wezincwadi kuyo. Uyabona ukuthi zonke izithonjana zikuwo, manje uyabona ukuthi ezinye zazo azinalutho futhi yilokhu okutholayo uma uzama ukufihla izithonjana yebo uma uya kusithonjana usishintshe uphawu olungekho eshalofini .
Sizobona lapha futhi lapho une-breaker emuva banenguqulo eguquliwe ebiza zonke lezi zithonjana ezihlukile futhi yebo ukubuyisela okwangempela nansi inguqulo eguquliwe ukuze uthathe i-hard drive yakho uye kufolda yomoya kesystem32 bese uskrolela phansi ngakho-ke ungathola igobolondo le-theta2 dot dll, manje ngokubuyisela okwangempela ungavele ulisuse lapha bese unamathisela elinye kulokho okufanele ukwenze ukulanda ikhithi ebizwa nge-replacer nokuthi lokhu kwenzenjani, lapho uthatha isinqumo soku buyisela ifayili, linamathisela zonke izinto ngakho-ke alikho endaweni eyodwa lapho ubeka khona usuku lokugcina, konke okunye kugcina kube yinto eyodwa nje esikusiza ukuthi ukuthole konke ukulungile okufanele ukwenze nje hudula bese uphonsa ifayela ofuna ukulifaka, shaya u-enter uzothola indawo yakho oyifunayo ukuze uyihudulele ku-ENTER futhi, cindezela u-Y futhi uzomaka ngeke ngiyenze, sengivele ngiyithathile futhi ingeyokuqala um yeah futhi lokho kuyishintsha manje kwesinye isikhathi njengoba ngine-f I-ound ukuthi akukona konke ukufaka iZithonjana emuva kokwakudala okudingayo udinga i-icon changer engiyisebenzisa Icon Packagi ng kodwa kukhona ezinye ezimahhala manje, uma ungena kupakethe lesithonjana, iya ezithonjaneni naseziqalekisweni zakho ubone ukuthi nayi eshalofini ukuxoxisana bese inombolo yesithonjana efana ne-Internet Explorer okungeyona eyangempela evela ku-ProgramFiles uma ufuna ukuthi ibuyele kokuzenzakalelayo okudingeka ube nakho ku-Windows chofoza isithonjana sokushintsha bese uya eshalofini lesishiyagalombili ukuze kufanele uyifune, chofoza i-marshall, ukhethe ifayela le-ShelfATT, bese uyahamba bese uthola i-Internet Explorer uma kungukuthi yebo ungayibeka ngaleyo ndlela ngakho-ke uma kukhona okushiyile kufanele ukudlule kukho konke lokhu bese ushintsha bonke bathanda lokho futhi basebenzise ifayela le-Shell dll ukuwafaka esikhundleni sabo ukuze abanye babo bangashintshwa njengekhompyutha ehlanya Faka amanye amadokhumende emayini lapho nginenkinga futhi yebo lokho kwenza nje ukubuyisela konke ku-XP ngoba mina kwakudingeka ukusebenza nezimpawu ze-Mac di angibukeki kahle kwiWindows XP noma kwiWindows Classic ngithi siyasibona futhi sitshele kanye ukuthi usukutholile lokhu futhi ufuna ukusethwa kwesithonjana esisha, noma ungawina, wenze ngendlela oyifisayo ukuzola bese ulanda iphakethe lesithonjana. Ithi uma usebenzisa i-Iconpackager, enye into ongayenza uma uya ekuphumuleni kwe-deviantART futhi useshe ishalofu kukhona ama-dll mods ongawathola wonke lawa ma-mods ahlukahlukene njengoba uthola ama-Vista macs futhi konke akwenzayo ngokuvamile kufaka ikhophi le-dll ifayela eliqukethe ifayili le-areplacer unezingaphezu kweyodwa ngoba kungaphezu komkhawulo omncane ukuthola konke kulungile. Lapha ungabona ukuthi ngabe ulilandile yini leli fayela, liza nefayela le-RAR futhi lilonke lizoqukatha ngaphezu kwelilodwa, ngaphandle kokuthi kube khona elilodwa kuphela.
Ingena ku-DLL-Mod, kepha iningi lazo linabanye abaningi ku-deviantART noma kunjalo, kepha liza nefayela le-areadme futhi likukhombise ukuthi ungakwenza kanjani, futhi liza nokulungiswa bese ubuyisela okunye ukuze wazi ukuthi yiziphi izinto okufanele uzenze dlala emuva futhi ngakho-ke, yebo, futhi isizathu esenza ukuthi ngifundise lokhu kungenxa yokuthi lokhu kwenzeke kimi futhi kuyacasula impela, kepha ngingahle ngithande izithonjana ezenza imodeli kule Shell file shelf file ngaphezulu kwe-DL ngoba ngokuvamile iba ngcono futhi ayisebenzisi inkumbulo eningi njengale. Inkumbulo enkulu ezothathwa yilokho okuzoba nefayela lakho loqobo i-selfie 82 dll futhi njengoba ubona ukuthi angisasebenzisi ingqikithi ye-Mac futhi ngisazokutholela lokhu kufundisa kuyo kepha bengidinga amandla ami futhi bekungasebenzi ngalesi sihloko semaki ngakho-ke sebenzisa i-windowsclassic ukuqala nje. Izixhumanisi engizonikeza ngazo isixhumanisi sale software lapha. Kuzoba uhlobo lwesivivinyo kuphela ngaphandle kokuthi ungazihlupha ngokuthola ukuthi uthenge bengizikhipha ngokuphelele kodwa kuyindlela nje ehlukile yokwenza lokho ngivele ngakuhumusha ngendlela yami ukuze yena ngivele ngiyishintshe akuyona indlela engiyibuyisa ngayo emuva ngendlela engangijwayele ukuba ngayo nokuthi umuntu ulibuyisela kanjani esikhundleni ishelufu lakho, benza ifayili le-dll nenye iwebhusayithi enhle engizoyithumela.
Ingabe lokho kuhle kuzo zonke izeluleko zakho ze-windows xp ekhasini lokuqala kuphela, inezeluleko namakhulu amabili namashumi ayisishiyagalolunye ayisishiyagalolunye ahlukene kanye nama-tweaks f Okwe-Windows XP futhi kunezinhlangothi zayo ezintathu, ngakho-ke zingaki ngokusobala ukuthi zingaki sezizonke, yebo, ahlukene amakhulu amane namashumi amathathu nesikhombisa? Amathiphu weWindows XP yiwebhusayithi ewusizo impela ezinye zazo ezingenangqondo okungenzeka ukuthi ngeke zisebenzise ezinye zazo zilusizo ngempela ngakho-ke namuhla ngizokubona ngokuzayo
Ngiyivula kanjani iWindows Shell Common DLL?
Ungakwenza kanjaniVula i-Windows Shell Common DLL
Ngena ngemvume kuAmawindinjengomlawuli uma iphrofayili yakho ejwayelekile yomsebenzisi ingenawo lawo malungelo.
Chofoza kufayela le-Qalaicon ekhoneni elingezansi kwesokunxele kwideskithophu bese uthayipha 'shell32.njll'ebhokisini lokusesha. ...
Chofoza ku - 'Vulange 'inkinobho ebhokisini le-Caution elivelayo. ...
Chofoza ku-'Notepad 'kufayela le-VulaNgeiwindi.
khombisa incwadi yomsebenzi yomuntu siqu
Ingabe ifayela le-shell32.dll yifayela lohlelo lwe-Windows?
I-SHELL32.dll iyifayela le-Windows DLL. I-DLL isifinyezo se-D ynamic L ink L L ibrary. Amafayela e-DLL ayadingeka ngezinhlelo noma izandiso zesiphequluli sewebhu, ngoba aqukethe ikhodi yohlelo, idatha nezinsizakusebenza. Ulwazi olulandelayo lungakusiza ukuthi unqume ukuthi i-SHELL32.dll yifayela lohlelo lwe-Windows noma uma kungohlelo lokusebenza ongalethemba.
Yini umsebenzisi ayiphawulayo.shell32.dll?
Amazwana womsebenzisi. I-shell32.dll ilabhulali equkethe imisebenzi ye-Windows Shell API, esetshenziswa lapho kuvulwa amakhasi wewebhu namafayela. Yifayela eliqukethe wonke amabhokisi engxoxo, imenyu yokuqukethwe, zonke izithonjana zewindi nezinye izinto eziningi ezibalulekile.
Zikuphi izithonjana ku-shell32.dll?
Esikhundleni salokho, bonke bangcwatshwe kufayela elilodwa le-Windows elibizwa nge-shell32.dll, elitholakala kufolda engu- c: windowssystem32 ngokuzenzakalela. Futhi yingakho isikhathi esiningi lapho uguqula isithonjana kusinqamuleli noma kufolda, utshelwa uhlu olude lwezithonjana ngokuzenzakalela.
hitman emuva iyahambisana
Yini inhloso yezingcingo ze-shell32.dll API?
Inhloso ye-shell32.dll ukuhlinzeka ngokusekelwa kokufinyelela kwefayela kanye nokusekelwa kokuvula ikhasi lewebhu kuzinhlelo zokusebenza zomshayeli. Enye yezinhlelo zokusebenza ezisebenzisa i-shell32.dll yi-Internet Explorer. Futhi iWindows Explorer isebenzisa izingcingo ezifanayo ze-shell32.dll API ngenxa yokuhlanganiswa kwayo okuqinile ne-Internet Explorer.